Agaghị ị hụrụ n'anya na-enwe ike belata ọnụ ọgụgụ nke ime akara ngwaọrụ gị na ezinụlọ gị ụlọ ahụ? Ugbu a, i nwere ike. Gị TiVo nwere ike na-achị ihe ngwa ị nwere ike ibudata n'ihi na gị iPad ma ọ bụ iPhone. Ị ga-nwere ike họrọ ibudata ukara TiVo ngwa, ma ọ bụ ị nwere ike họrọ a abụọ ọzọ ngwa. Ọtụtụ ndị nwere ike na-enweghị ha smartphone maka okwu, Ya mere, gịnị na-etinye ya iji na a ọhụrụ, okike ụzọ? Ebe a na-iri nke n'elu uzo ozo ka TiVo ngwa n'ihi na iPad na iPhone.
Nke a fun ikwu ngwa bụ free na iTunes ụlọ ahịa, ebe a maka Com Hem ahịa na-enwe ike iji na ha TiVo ngwaọrụ. Ị nwere ike ịnweta ọkacha mmasị gị nchịkọta, na ọbụna rụchaa ekiri a show na mkpanaka gị na ngwaọrụ na ị malitere na-ekiri na gị TiVo. E nwekwara a mgbazinye ọrụ ị nwere ike iji na-ekedo na-enye gị ohere na-ekiri na gị TiVo Togo ngwa n'ihi na 48 awa mgbe e mesịrị. The maara TiVo search atụmatụ a gụnyere, dị ka bụ ikike setịpụrụ E ma jikwaa usoro ntọala. Mgbe ahụ, n'ezie, mgbe ị nọ n'ụlọ n'ụlọ na ekwentị gị na jikọọ na wireless netwọk, ọ na-aghọ gị ime akara, ebe ị nwere ike ịgbanwe ọwa, ngwa ngwa n'ihu, ma ọ bụ Toggle na-ebi ndụ TV.
Nke a free ngwa bipụtara otu n'ime ndị mbụ na fọdụrụ n'ezinụlọ na-adịgide adịgide internet na enye enye gị nweta gị TiVo enweghị na-eji mgbe niile n'ime ime obodo. Ọ bụ dị na Apple iTunes ụlọ ahịa na ebe a. Ọ scores ukwuu na ọrụ maka ya ala nke iji na uru. Ị pụrụ ịchọ ndị na-eduzi si a ọnụ ọgụgụ nke isi mmalite gụnyere Hulu, iTunes, na Netflix; oge na teepu na gị TiVo; ma na-eme nnyocha ụfọdụ na ọkacha mmasị gị omee ma ọ bụ ịmụta ihe banyere ndụ n'ezie omume a na-sitere n'ike mmụọ nsọ akụkọ site na ịnweta Wikipedia na IMDb. Ị pụrụ ọbụna nweta gị Netflix akaụntụ ma tinye ihe nkiri na gị kwụ n'ahịrị.
Dị ka ị pụrụ surmise site m na aha, nke a na-kpọmkwem haziri maka Apple iOS. Ọ bụ maka free na ebe a. Dị ka Apple, a na ngwa bụ ha n'elu download na TV ndu ngalaba. Ọ na-ahapụ ị na-ahụ ihe dị na ọtụtụ gụgharia ọrụ dị ka Hulu, Netflix, na iTunes, gbakwunyere ị pụrụ ịmụta ihe banyere-eme ihe nkiri ma ọ bụ na-egosi na IMDb na Wikipedia. N'ihi na US na Canada ọrụ, ị nwere ike ịnweta a Obodo TV Ndepụta ndu, kwa. Ya mere, mara mma nke ukwuu n'agbanyeghị ihe TV isi iyi ọrụ ị nwere site na gị TiVo, ị ga-enwe ike iji nweta ya.
4. Peanut Plus Ime & Keyboard maka TiVo DVR
Nke a bụ adịchaghị version nke ọzọ ngwa anyị ga-ele anya na na a oge. Ọ bụ dị maka ego si iTunes ụlọ ahịa na ebe a. Ọ na-arụ ọrụ na ma ndị iPad na iPhone, na ọ na-abịa tech support kwesịrị ị mkpa ọ bụla enyemaka. Ebe ọ bụ na nke a bụ ụgwọ mbipute, ị gaghị ahụ ihe ọ bụla na mgbasa ozi. Ị nwere ike ịnweta gị ọkacha mmasị site swiping ekpe. Ọ bụrụ na ị bugharia ngwaọrụ gị, ị ga-enwe ike sere n'elu a zuru keyboard, nke ga-eme na-abanye ọmụma nnọọ mfe. Ọ nwere ike ma jikọọ site na Apple Bonjour njikọ ọrụ ma ọ bụ site n'iguzobe a ntuziaka njikọ. Peanut bụ adịghị enwe ike ime ihe ọ bụla TV njikwa, Otú ọ dị, dị ka olu. Ị ga-mkpa nwere a TiVo usoro 3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị version.
5. Peanut Ime & Keyboard maka TiVo DVR
Nke a bụ free version nke Peanut ngwa. Ọ bụ dị na iTunes ụlọ ahịa na ebe a. Ebe ọ bụ free, ọ na-abịa na mgbasa ozi, ma ọrụ nwere gosiri ha dị ka adịghị bothersome. Ọ na-ese a otutu dị ka ahụ n'ezie TiVo ime, gbakwunyere dị ka ụgwọ mbipute, ọ bụrụ na gị bugharia ngwaọrụ, ị nwere ike ịnweta a keyboard maka mfe ntinye nke searches. Dị ka ụgwọ mbipute, ọ nwere ike Jikọọ na-iji Bonjour ma ọ bụ aka site n'isetịpụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ọtụtụ. Ọ na-adịghị ịchịkwa TV. Jide n'aka na ị nwee gị TiVo iji Network Remotes otú ọ ga-abụ ngwa ngwa enwe ike iji Apple ngwaọrụ na ngwa.
Nke a free ngwa, mgbe paired na iWavit ngwaọrụ, ga-ekwe ka gị Apple obere ngwaọrụ aghọ a TiVo ime maka Premiere nlereanya. Ị nwere ike ibudata ya na ebe a. Ị ga-achọ ẹkedori ngwa mbụ, mgbe ahụ ịgbakwunye iWavit ngwaọrụ. Mgbe ahụ, ọ na-arụ ọrụ dị ka a TiVo ime na nnukwu, mfe ịhụ buttons. Ị pụrụ ọbụna ime ka ọ na anya 3D site swiping site n'aka ekpe gaa n'aka nri. Ọ bụ a gbaa udo ihuenyo, otú ahụ ọbụna ma na ị nwere ọkụ apụ n'ihi na a ezi sinima ahụmahụ, ị ga-enwe ike ịhụ ngwa. E nwere onye na ịnara Iye mgbakwunye maka iWavit na-ahapụ gị iji Iye atụmatụ si ruo 300 ụkwụ pụọ. Ọ nwekwara ike kenyere aka nile nke ebe obibi gị nkiri ngwaọrụ.
British TV Fans na TiVos ike ibudata na ngwa n'ihi na ha na usoro, kwa. Ọ bụ a free ngwa na ebe a. Ị nwere ike ele ruo ụbọchị asaa ozugbo, setịpụrụ n'ime obodo na teepu na gị TiVo, ma na-eso na ọkacha mmasị gị mmadụ mgbasa ozi na saịtị, niile si otu ngwa. Ọ na-arụ ọrụ maka Freesat, Freeview, Sky, na Virgin Media usoro. Ị nwere ike hazie ndị Ndepụta tụgharịa ekwesị ma ọ bụ horizontally, nhọrọ gị. Ọ bụrụ na ị na-ahụ a na-egosi na gị Sky ma ọ bụ Virgin Media TV Ndepụta, ị nwere ike pịa bọtịnụ na-ekwe ka na show ka ịmalite ndekọ ozugbo. Ụfọdụ na-egosi nwere iTunes logo n'akụkụ ha, n'ihi ya, ị nwere ike pịa ibudata na show ozugbo.
A na ngwa bụghị free, ma ị ga-esi a otutu ike maka gị ego gị. Ọ bụ dị na ebe a. Ọ na-arụ ọrụ n'elu wifi netwọk na gị TiVo usoro 3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị igbe atụgharị gị iPhone ma ọ bụ iPod Touch n'ime a n'ime obodo. TiMote-enweta ịja mma reviews maka otú ngwa ngwa na anabata ọ bụ, gbakwunyere otú mfe ọ bụ iji. N'adịghị ka ụfọdụ ndị ọzọ ebe ị ga-usoro adreesị IP gị TiVo n'ime ngwaọrụ, ị nwere ike iji nke a iji na-akpaghị aka chọta na-amalite na-eji gị Tivo. The keyboard nhọrọ maka inputting gị search ibiere bụkwa dị na ngwa a. Ị nwere ike melite a ọkacha mmasị ndepụta na ele ihe ị na-ekiri na ngwaọrụ mkpanaaka.
9. DVR Ime
Ezie na nke a na-eji ngwa bụghị free, ọ bụ na-otu n'ime ntakịrị na-eri ngwa i nwere ike ịhụ, ma ọ bụ ọtụtụ obere oké ọnụ karịa a abụọ n'ime obodo ga-abụ. Ị nwere ike ibudata ya na ebe a. Ọ na-arụ ọrụ na TiVo usoro 3 ma ọ bụ Premiere ụdị. DVR Ime nwere ike igosi gị ihe na-akpọ na ekwentị gị nakwa dị ka ịchịkwa gị TiVo. A ngwa ngwa swipe accesses a keyboard maka mfe nchọgharị. Ọ na-arụ ọrụ karịrị wifi na ọ na-akpaghị aka nwere ike ịchọpụta gị TiVo otú melite bụ ikuku. Dị nnọọ jide n'aka na ị na-agwa gị TiVo ịnabata Network Ime Controls. Ị nwere ike melite a ọkacha mmasị ndepụta iji mfe nweta ọkacha mmasị gị ọwa.
Logitech bụ otu onye nke ụwa si ​​n'elu obere ntinye ngwaọrụ emepụta, na-eme ụmụ oke, keyboards, na remotes. Ugbu a, ha na-enye a free ngwa na iTunes ụlọ ahịa, ebe a, na-akawanye elu akara maka otú mfe ọ bụ iji. Ị ga-mkpa nwere Harmony Link unit, ma na nke ahụ, gị iPad ma ọ bụ iPhone-aghọ a multi-ọrụ n'ime ime obodo. Ị nwere ike ịlele mmemme ndu, enweta na Watch Ugbu a bọtịnụ na-ekiri ndị na-egosi, ma ọ bụ usoro gị TiVo. Ọ nwekwara ike-ewe gị ka a fim ma ọ bụ na-amalite a music iyi maka gị. The Harmony Link ga-agụnye ihe Iye nhọrọ otú i nwere ike na-arụ ọrụ niile nke ebe obibi gị ntụrụndụ igbe na-enweghị na-ntụrụndụ unit ụzọ oghe.
Olee otú iyi TiVo ka ọzọ TV
5 Solutions nkwado ndabere na mpaghara gị iphone Photos
> Resource> iPhone> Top 10 Alternatives ka TiVo App maka iPad na iPhone